Kullamo xasaasi ah oo ka socda Villa Somalia, qorshaha Amisom oo la diiday & Mareykanka oo… |
Kullamo xasaasi ah oo ka socda Villa Somalia, qorshaha Amisom oo la diiday & Mareykanka oo…
cheap zoloft online, dapoxetine online. Kullamo is-daba jooga ah ayaa ka socda xarunta madaxtooyada ee Villa Somalia, ayada oo dowladda Soomaaliya ay isku dayeyso inay xal u hesho sugidda amniga xaruntaas, oo Al-Shabaab ay weeraro ay la beegsatay.
Kullamada dhacaya ayaa waxaa qeyb ka ah dhammaan laamaha ammaanka, madaxda ugu sarreysa dalka iyo saraakiisha ciidamada Amisom.
Waxaa la isku dayayaa in la badiyo baraha maamul ee Villa Somalia iyo in la adkeeyo habka lagu soo gali karo, kadib markii ay dhacday in hal qof oo ka shaqeeya Villa Somalia uu awood u yeeshay inuu dabley soo geliyo xarunta.
Waxaa sidoo kale qorshaha qeyb ka ah in la sameeyo ciidamo sirdoon ah oo isha ku haya dhammaan shaqaalaha madaxtooyada, oo aan la isku haleyn karin dhammaantood.
Saraakiisha Amisom, ayaa soo jeediyey in dhammaan ciidamada Soomaalida ah laga saaro Villa Somalia, oo ayaga ay la wareegaan ammaanka madaxtooyada, hase yeeshee Xasan Sheekh iyo Cabdi Weli ay taasi diidan.
Waxa ay u sababeeyeen in ay dhaawaceyso sharafta iyo qarannimada in ay isku haleeyaan ciidan ajnabi ah oo kaliya. Sidoo kale waxa aysan hubin in ciidamada Amisom ay nafta u huri karaan iyo in kale, maadaama weeraradii hore lagu bartay inay naftooda difaacaan un.
Xubno ku sugan Villa Somalia ayaa Caasimada Online u sheegay in Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha ay qabaan in ciidamada Soomaalida laga saacido kaliya qaabka farsamada, waxna laga badalo heerka ammaanka ee Villa Somalia, ayna ayaga ku filan yihiin
Waxaa sidoo kale lasoo jeediyey in dalalka horumaray gaar ahaan Mareykanka la weydiisto inay soo diraan khuburo amni, oo eega dhammaan dal daloolada Villa Somalia ee xagga amni, iyo sida loo xaqiijin karo.
Waxaa xusid mudan in maanta dowladaha Maraykanka iyo France ay sheegeen in ay tababar siinayaan ciidamo gaar ah oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasoo ka qeyb qaadanaya dagaalka lagula jirro Argagixisada.
FBI-da Mareykanka, ayaa horey u baartay weerarkii West Gate ee Nairobi, waxaana la rumeysan yahay inaysan diideyn, haddii dowladda Soomaaliya ay codsi u dirsato.
Weli heshiis ah dhab ah lagama gaarin qorshayaashan, lamana yaqaan habka ugu haboon ee xal loo heli karo.
Sida ay lee yihiin xubno kullanka goob joog ka ahaa oo Caasimada Online la hadlay, caqabadda ugu weyn ee taagan ayaa ah cidda la aamini karo, maadaama dad aan laga maleesaneyn inay ku xiran yihiin Al-Shabaab ay dhacday inay ayaga la shaqeeyaan, sida wiilkii fududeeyey weerarkii u dambeeyey.